केपी ओली « Nagarik Khabar
कपिलवस्तु । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकार निकम्मा रहेको बताएका छन् । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका–८ बहादुरगन्जमा जसपा केन्द्रीय सदस्य मंगल प्रसाद गुप्तालाई प्रवेश गराउँदै कम्युनिष्ट सरकार ढालेर
भीम रावल अन्तिमसम्म केपी ओलीसँग किन भिडे ?
काठमाडौं । भीम रावललाई प्रष्ट थाहा छ, उनी चुनाव जित्दैनन्। तर, पनि अन्तिमसम्म पार्टी अध्यक्षमा उठ्ने अडान राखे। रावलकै अडानका कारण एमालेको १०औं महाधिवेशन ‘सहमति’को बन्न सकेन। अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र
कांग्रेस होसियार ! प्रचण्डले सिध्याउलान्ः केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई बिगार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । युवा संघ नेपालको ‘साइबर सर्कल’ घोषणा कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन
महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई पार्टीको रूपमा निम्ता गर्न मिलेनः केपी ओली
काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको १० महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको रूपमा निम्ता गर्न नसकिने बताएका छन् । एमालेले पार्टी अनुशासनको कारबाही गरेका
मलाई डाक्टरले लड्न हुँदैन भनेको छ : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लड्न नहुने चिकित्सकले सुझाव दिएको बताएका छन् । नेपाल खेलकुद महासंघले आइतबार गरेको ‘खेल नीति सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै ओलीले
गाँसको खोजीमा बढी ध्यान दिनुपर्दा खेल क्षेत्रको विकास भएनः केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेलाडीले खेलमा भन्दा बढी बाँच्नका लागि गाँसको खोजीमा बढी ध्यान दिनुपर्दा खेल क्षेत्र विकास नहुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल खेलकुद महासंघले
देश विकासमा व्यवधान खडा गर्न एमाले नेतृत्वको सरकार भत्काइयो : केपी ओली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकासमा व्यवधान खडा गर्न जनताबाट निर्वाचित दलको सरकार भत्काएर अर्को सरकार गठन गरिएको बताएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले परमादेश दिने चार न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिपक्षी दलका
सांसदहरुलाई केपी ओलीको निर्देशन, ‘आज पनि संसद अवरुद्ध गर्नेछौं’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आजको संसद बैठक पनि अवरुद्ध पार्ने बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई निर्देशन दिँदै ओलीले ‘मर्यादित भएर
केपी ओलीले सम्झिए तेजाब आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवस
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हरेक भदौ २५ गतेलाई तेजाब आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसको रुपमा घोषणा गरेको थियो । आज भदौ २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा